के इटालीका राजकुमार फेसन सोका लागि नेपाल आएका हुन्? - Nepal Factcheck
केही नेपाली अनलाइन मिडियाहरुले माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवेको समाचार राखेका छन्। गएको हप्ता भएको यो फेसन सो सगरमाथा आधार शिविरमा आयोजना गरिएको दावी ती समाचारहरुमा गरिएको छ। धेरै समाचारहरुमा यो फेसन सोमा इटालीका राजकुमार पनि सहभागी भएको उल्लेख छ। त्यसैगरी कुनै समाचारमा नेदरल्यान्डसकी राजकुमारी पनि सहभागी भएको दावी गरिएको छ।
के यी दावी सही हुन्? हामीले यसबारे तथ्य जाँच गरेका छौँ।
रातोपाटीले ‘माउन्ट एभरेस्ट फेसन सोले तोड्यो आफ्नै कीर्तिमान’ शीर्षकको समाचार राखेको छ। समाचारमा लेखिएको छ- ‘यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन विभिन्न १० देशका मोडल नेपाल उपस्थित भएका थिए । जसमा इटालीका राजकुमार कोसिमो दे मेडिसी समेत उपस्थित थिए । उनले प्रतियोगितामा नेपाली कपडा शो गरे।’
त्यसैगरी नेपालप्रेसले ‘संसारकै अग्लो ठाउँमा फेसन सो : सुपरमोडलदेखि इटालीका राजकुमारसम्म हिँडे हिउँले ढाकिएको र्‍याम्पमा (तस्बिरहरु)’ शीर्षकमा समाचार राखेको छ।
समाचारमा लेखिएको छ- ‘विभिन्न १० मुलुकबाट आएका सुपरमोडलसहित इटालीका राजकुमार कोसिमो दे मेडिसीले नेपाली डिजाइन लगाएरै र्‍याम्प नापे । कासा डिजाइन र बुद्धिस्ट लाइनका डिजाइन लगाएर इटालेली प्रिन्सले नेपाली डिजाइनलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरे।’
त्यस्तै शिलापत्रले राखेको ‘विश्वकै अग्लो स्थानमा दोस्रोपटक फेसन शो, र्‍याम्पमा हिँडे चर्चित अनुहार’ शीर्षकको समाचारमा ‘विभिन्न १० मुलुकबाट आएका मोडलसहित इटालीका राजकुमार कोसिमो दे मेडिसीले नेपाली डिजाइन लगाएरै र्‍याम्पमा हिँडेका छन्’ लेखिएको छ।
‘माउन्ट एभरेष्ट फेशन–शो’ले तोड्यो आफ्नै रेकर्ड शीर्षकको समाचारमा देशसञ्चार अनलाइनले पनि ‘उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन विभिन्न १० देशका मोडल नेपाल आएका थिए। जसमा इटालीका राजकुमार कोसिमो दे मेडिसी समेत उपस्थित थिए । प्रतियोगितामा उनले नेपाली कपडा लगाएर हिउँले ढाकिएको रनवेमा ‘र्‍याम्प वाक’ गरेका थिए’ लेखेको छ।
त्यस्तै डीसीनेपालले आफ्नो शीर्षकमै इटालीका राजकुमारलाई जोडेर ‘शेर्पा फेसनमा सगरमाथाको फेदीमा इटालीका राजकुमार’ बनाएको देखिन्छ।
इकागजले भने राजकुमार मात्र हैन, राजकुमारीलाई पनि शीर्षकमा समेटेको छ। ‘सगरमाथा बेसक्याम्पको हिउँमाथि राजकुमार र राजकुमारीसहितको ‘फेशन शो’ (फोटोफिचर)’ शीर्षकको समाचारमा लेखिएको छ- ‘शो मा इटालीबाट…नेदरल्याण्डकी राजकुमारी एलीसा क्याटरिना इगर, इटालीका राजकुमार कोसिमो मारिया डे मेडिसी डी टोसकाना डी ओटाजानो…उपस्थित थिए।’
समाचारमा इटालीका राजकुमार लेखिए पनि इटाली राजतन्त्रात्मक नभएर गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। इटालीको संविधानमा ‘प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र’ लेखिएको छ। २ जुन १९४६ मा भएको राजतन्त्र कि गणतन्त्र रोज्ने जनमत संग्रहमा ५४.२७ प्रतिशत मतका साथ इटालीले राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अंगालेको थियो। त्यसैले अहिले इटालीमा राजा वा राजकुमार छैनन्, राष्ट्रपति छन्। सर्जियो माटारेला अहिले त्यहाँका राष्ट्रपति हुन्।
समाचारमा उल्लेख भएको नाम कोसिमो दे मेडिसी इटालीको सहर फ्लोरेन्स एक समय शासन गरेका व्यक्ति त हुन्, तर उनको मृत्यु सन् १४६४ मै भएको विकिपेडियामा उल्लेख छ।
कोसिमो दे मेडिसी, प्रिन्स र टस्कानी कीवर्ड राखेर गुगलमा सर्च गर्दा समाचारमा उल्लेख भएका व्यक्तिका बारेमा कतै कुनै आधिकारिक जानकारी भेटिएन। गेट्टी इमेजेजको एउटा फोटोको क्याप्सनमा भने Prince Cosimo de Medici र Princess Elisa नाम राखेको भेटियो। तर यसको पुष्टि हुने अरु सामग्री हामीले भेटेनौँ।
एफएसएचएन नामको एउटा वेबसाइटमा उनै एलिसाको बारेमा फिचर बनाइएको छ। त्यसमा उनले कोसिमो दे मेडिसीको बारेमा दावी गरेकी छिन्, ‘Cosimo de’ Medici, born and raised in Milan, isadescendant from the old Florentine family, de’ Medici. Cosimo left Milano at the age of 16 to finish high school in the UK and never left since.’
इकागजले नेदरल्यान्डकी राजकुमारी भनेर लेखेको एलिसा क्याटरिना इगर उनै कोसिमो दे मेडिसीकी प्रेमिका रहेको यसमा उल्लेख छ। यसमा उनी नेदरल्यान्डसकी राजकुमारी भएको कतै उल्लेख छैन। नेदरल्यान्डसको राजपरिवारको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि एलिसाको नाम देखिँदैन।
दावी : इटालीका राजकुमार कोसिमो दे मेडिसी र नेदरल्यान्डसकी राजकुमारी एलिसा क्याटरिना इगर नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा आयोजित फेसन सोमा सहभागी भइन्।
तथ्य : भ्रामक सूचना। इटाली गणतन्त्रात्मक देश भएकोले त्यहाँ कुनै राजकुमार छैनन्। पूर्व राजपरिवारको सदस्य भएको पुष्टि हुने पनि आधिकारिक जानकारी कतै छैन। त्यसैगरी एलिसा नेदरल्यान्डसकी राजकुमारी नभएको त्यहाँको राजपरिवारको आधिकारिक वेबसाइटले देखाउँछ।